Ampifanaraho amin'ny endrika ivelany ElementaryOS Luna | Avy amin'ny Linux
Pavloco | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Efa nolazaiko foana izany Xfce birao tena azo alamina izy io ary saika ny iray ihany no azo tratrarina (na tsara kokoa) valiny fa tsy amin'ny hafa Tontolon'ny Desktop. Ny latabako, izay atolotro anao eto ambany, dia fanandramana hanakaiky kokoa ny fisehon'ny Volana ElementaryOS. Tamin'ny farany dia toy izao:
Andao hojerentsika ny fomba fanefana azy amin'ity fomba ity 😀
1 LOHA HEVITRA LOHA HEVITRA
1.1 PANELE ambony
1.2 PANELA MAORA
1.3 WALLPAPER DESKTOP
LOHA HEVITRA LOHA HEVITRA
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny misintona ny farany Lohahevitra GTK an'ny ekipa fototra. Izy ireo dia azo atao mitovy eto.
Mametraka ny lohahevitra tokony hataontsika mamoaka atiny ny fonosana fanabeazana.tar.gz Ao amin'ny boky adiresy ~ / .tema (Mety hafenina ity fampirimana ity, tsindrio ctrl + h, hahitanao ireo lahatahiry miafina. Raha tsy misy io dia hataonay) na dia ho an'ny mpampiasa nametraka azy aza io. Safidy hafa (ilay ampiasaiko) dia esory ao anaty lahatahiry [lohahevitra mafy] / usr / fizarana / lohahevitra. Mba hanaovana azy amin'ny grafika dia mila manoratra amin'ny terminal isika, sudo thunar (na ny mpitantana ny rakitrao). Ho azon'ny mpampiasa rehetra izany fa Mitandrema amin'ity safidy farany ity, aza manao zavatra hafa afa-tsy ny manaisotra ny fonosana.
Avy eo dia mila mametraka ny lohahevitra ianao sary masina (Ireo mpampiasa Xubuntu dia mampiditra azy ireo amin'ny alàlan'ny default). Azonao sintonina avy amin'ny eto.
Amin'ity indray mitoraka ity ny fonosana elementary_icons_by_danrabbit-d12yjq7.zip misy fonosana roa. Ireo fonosana roa ireo tsy maintsy esorinao izy ireo Ao amin'ny boky adiresy ~ / .icons (Mety hafenina ity fampirimana ity, kitiho ny ctrl + h, raha te hahita ireo folder miafina. Raha tsy misy dia mamorona azy) indray dia ho an'ny mpampiasa nametraka azy ihany io. Safidy hafa (indray) dia ny mamoaka azy ireo ao amin'ny lahatahiry [Harddiskdrawing] / usr / fizarana / sary masina. Raha hanao an-tsary dia mila manoratra amin'ny terminal ianao, sudo thunar (na ny mpitantana ny rakitrao).
Avy eo dia miroso amin'ny fametrahana ireo endritsoratra na endritsoratra isika. Manana ny karazana fonja antsoina hoe aho Nofy Caviar azonao sintonina avy izany pejy, na dia ilay taratasy izay nampiasaina tamin'ny fomba ofisialy aza ElementaryOs Luna es Sokafy Sans azonao sintonina avy eto. Samy "Loharano Maimaimpoana", samy mila nalaina ny atin'ny fonosana ao [theharddiskdrawing] / usr / share / fonts / truetype .
Avy eo mankany misafidy lohahevitra gtk sy kisary ary manaova vokany andao mankany Mmenio »Fikirana» Mpitantana fikirakira »Fisehoana ary ao amin'ny tab "style" misafidy isika fototra. Avy eo dia mankany amin'ny kiheba isika "Icon" ary misafidy isika maizina fototra, avy eo mankany "font" ary misafidy isika Sokafy Sans o Nofy Caviar (Manana izany amin'ny sahisahy aho).
Taorian'i Mmg »Fikirakirana» Mpitantana fikirakira »Mpitantana an-dabilio ao amin'ny tab "style" mifidy ny lohahevitra izahay fototra, amin'ny lafiny ankavanana dia misafidy ny Lohateny Font (Open Sans na Caviar Dream). La Fanitsiana ny lohateny es "mifantoka". Ary ao amin'ny Layout Layout, raha tianao izy ireo mba hozaraina mitovy amin'ny ElementaryOs alamino toy izao izy ireo:[Akaiky] [Lohateny] [Maximize]. Izaho manokana dia tsy tiako ka navelako tamin'ny fomba mahazatra izy ireo.
Hialokaloka ny varavarankely hataon'izy ireo Menu »Configuration Configuration manager» Fikirakirana mpitantana varavarankely, mankanesa any amin'ny kiheba "Compositeur" mifantina "Ampidiro ny firafitry ny fampisehoana" ary zahao ireo boaty telo voalohany.
Ankehitriny dia manohy manamboatra ny tontonana ambony manandrana maka tahaka ny Wing Panel.
Raha efa manana tontonana ianao eo an-tampony dia omeo tsindrio faharoa »Panel» Safidin'ny tontonana. RAHA mbola tsy anananao io afaka mandeha mankany ianao Menu »Configuration» Configuration manager »Panel ary tsindrio ny bokotra maitso izay a + ho an'ny hametraka tontonana vaovao ary sintomy eo an-tampon'ny efijery.
Ao amin'ny tab "Screen" avelantsika toy izao manaraka izao.
Asehoy ary afeno ny tontonana mandeha ho azy> Off
Size> safidio izay tianao, fa raha mihoatra ny 36 teboka dia haverina ny sarin'ilay lohahevitra, manome endrika somary ratsy tarehy. Raha mbola tianao kokoa ny tontonana kely kokoa dia azonao atao ny mampiasa loko matevina (mainty) ao amin'ny fisehoana> Takelaka Style.
Ao amin'ny tab "Fisehoana" avelao toy izao.
Style> Tsy misy, ampiasao ny style an'ny rafitra. (Raha mihoatra ny 36 teboka ny tontonanao dia apetraho ny Solid Color ary mifidiana loko mainty)
Ao amin'ny tab "Singa".
Raha te hiditra amin'ny fananan'ny singa tsirairay dia mila tsindrio indroa fotsiny ianao.
Mino aho fa ny Mpampiasa fampiharana XFCE afaka maka tahaka an'i Sligthshot tsara be izy, indrindra amin'ny XFCE 4.10. Raha tadiavintsika izany fa tsy manampy ny singa 1 (menio nentim-paharazana) dia tohizo ary vakio ny naoty amin'ny faran'ny lohahevitra.
ny singa Ireto ny bara:
1.- Amin'ny ankavia ny "Menu lozisialy": Amin'ny ankapobeny dia totozy ny kisary menio, fa ny sary kisary dia novaiko ho a "to" vita amin'ny Gimp, na dia azonao atao aza ny mametraka a sary mangarahara vita amin'ny Gimp. Manova ny sary masina ianao fananana> kisary. Amin'ny mandalo amin'izay lazainy "Lohatenin'ny bokotra" ianao manova izay lazaiko ho an'ny teny "Applications".
2.- Aorian'ny a "Separator", fa amin'ny fananany no fidintsika Style> Mangarahara ary ampandehananay ilay boaty "Expand".
3.- Avy eo apetrakay ny plugin "Daty sy ora" Nataoko manokana ireo masontsivana ireo Format> Ny fotoana ihany; amin'ny Karazan-tsoratra «Caviar Dreams Bold» u "Open Sans"; Format> Custom miaraka amin'ireo masontsivana ireo (Tsy misy teny nalaina) "% B% d -% I:% M".
4.- Avy eo dia mametraka mpampisaraka indray izahay, ary amin'ny fananany no fidintsika Style> Mangarahara ary zahao ilay boaty hanitatra.
5.- Aorian'izay dia ampianay ilay plugin antsoina "Tondro plugin" (raha tsy manana ianao dia afaka manampy antso hafa «Faritra fampandrenesana».
6.- Avy eo mametraka hafa isika Separator, amin'ny fananany no fidintsika Style> Mangarahara fa eto tsy navoaka.
7.- ary amin'ny farany dia manampy a "Pitcher" mandeha any amin'ny izy ireo fananana, tsindrio ny bokotra «Manampia singa poakaty» (ny kisary dia + amin'ny pejy). Toy izao no amboarinao azy:
Fanamarihana: Session Menu
Working Directory: (banga)
Icon: Safidio ny sary masina rehetra> Ikona fikarohana: tontonana rafitra-fanidiana; ary ianao no mifidy azy. omenao "Mitsitsia" y "Akaiky"
Ny Panel ambany dia somary sarotra kokoa (ary tsy mahazo aina raha mampiasa ny takelaka) hatramin'ny seranan-tsambo ofisialin'ny ElementaryOs manana fampisehoana tena tsara ary toa tsara. Mampiasa ny takelaka aho hitehirizana loharano, fa raha te hampiasa ianao hazo fisaka Eto aho dia mandefa torolàlana vitsivitsy momba ny fametrahana azy.
En Xubuntu na nalaina avy amin'ny Ubuntu (Mint XFCE) East lahatsoratra dia mazava tsara.
En Debian East bilaogy nosoratan'i Elav dia miasa tonga lafatra.
Amin'ny fizarana hafa dia tsy fantatro izany. 🙁
Izahay dia mamorona ny tontonana ambany mitovy amin'ny any ambony ary manamboatra azy toy izao.
Ao amin'ny tab "Screen" avelao toy izao.
Asehoy sy afeno ny tontonana mandeha ho azy> Mivoha (Tsy manana fierena an-tsaina)
Size> mifidy izay tiantsika isika
Y mampihetsika isika ilay boaty, Ampitomboy ho azy ny halavan'ny tontonana.
Ao amin'ny tab "Fisehoana" avelantsika toy izao manaraka izao.
Style> Loko matevina sy loko mifidy loko mainty.
Alfa> 100% (ity ny mangarahara amin'ny tontonana)
Ao amin'ny tab "Singa" Apetrakay ireo singa tadiavinay, saingy ny singa [b] «Kitendry Window» [/ b] dia tsy tokony ho diso hahalala hoe inona ireo programa nosokafantsika.
Tahaka izao no amboarinay:
Solo mampihetsika isika ilay boaty «Asehoy ny bokotra fisaka» ny ambiny avelantsika izy ireo nefa tsy mavitrika.
Order sort> Lohatenin'ny vondrona sy famantaranandro.
Fananganana Window> foana
Ny boaty dia mamela azy ireo araka ny itiavanao azy.
Ny boaty roa voalohany ihany no safidintsika.
ny mpandefa ampiana toy izao izy ireo.
Miaraka amin'ilay bokotra hametraka mifidy mpandefa izahay. Handeha any amin'ny fananana an'ny mpandefa ary tsindrio "Ampio". Izahay dia mitady ilay fampiharana tadiavinay ary tsindrio "Ampio" indray ary dia izay. Miezaha hanao mpandefa iray isaky ny fampiharanaRaha mametraka fampiharana mihoatra ny iray isaky ny mpandefa ianao dia hisy zavatra toy ny menio izay tena sarotra ampiasaina.
Ary farany manova ny desktop background. Azonao atao ny misintona ny Wallpaper ofisialy ElementaryOS avy eto.
ny foana y decompress aiza no tian'izy ireo. Omeo ny sarin'ny fitiavanao azy ireo tsindrio faharoa ary misafidy "Ataovy toy ny temotra".
Ary dia izay, manana isika XFCE miaraka amin'ny fisehoana mitovy amin'ny Volana ElementaryOS.
Fanamarihana: Araka ny nolazaiko dia mieritreritra an'izany aho Application Finder XFCE indrindra ny farany dia tsy mangataka na inona na inona Sligthshot (Mpandefa ofisialy fanabeazana fototra) ka andao apetraka amin'ny bara ambony izay alehan'ity farany. Minoa ny singa tontonana un barika, tokony handeha hatrany am-piandohana (hatrany ambony). Andao mankany amin'ny azy ireo fananana ary manindry izahay «Manampia singa poakaty vaovao» Ao amin'ny varavarankely izay misoratra dia manoratra izahay:
Fanehoan-kevitra: Application launcher
Avelantsika ho azy ny sisa tavela ary tsindrio «Mamorona»
Miverina any amin'ny mpandefa fananana ary ao amin'ny tab "Advanced", ampiasainay ilay boaty «Asehoy ny marika fa tsy kisary». Manosika izahay "Akaiky" ary tsindrio ny mpandefa. Efa eo amin'ny fampiharana no mifantina ny boaty "Mihidy rehefa avy nihazakazaka" (XFCE 4.8 ihany). Ary vonona. Ny lafy ratsy dia maharitra kokoa ny mihazakazaka noho ny menio ary tsy nahita fomba hisorohana azy tsy hihazakazaka eo afovoan'ny efijery aho. Toy izao ny endriny amin'ny farany.
Avy amiko daholo izany, manantena aho fa tianao izany. Mandrapihaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ampifanaraho amin'ny hoditra ElementaryOS Luna ny XFCE
Gabriel Andrade (@zurdo_utm) dia hoy izy:
mora ve ny manao kde xfce?
Valiny tamin'i Gabriel Andrade (@zurdo_utm)
ANDRIAKAKY Ô! UBUNTU! (@omgubuntu) dia hoy izy:
Valio ny OMG! UBUNTU! (@omgubuntu)
Mahafinaritra ery !!! 🙂
Toa tsara sy madio be 🙂
Ary nohazavaina tsara ..
+ iray ho azy: [sary harddisk]
Manantena aho fa nahita lahatsoratra mitovy amin'izany (nohazavaina ho an'ireo vao novonoina hyper) tamin'ny dingana voalohany nataoko niaraka tamin'ny GNU / Linux .. hehe ..
Rehefa lehibe aho dia te ho toa anao .. hehe .. (aza raisina ho mampihomehy, eto Paragoay dia endrika fandokafana mahafinaritra izany)
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, faly aho mahita fa mahasoa azy. Miezaha hanazava azy araka izay azo atao mba hahafahan'ny olona mahatakatra azy. Salama.
namboarina tamim-pankasitrahana .. hehe ..
Tena tsara aho hanandrana azy amin'ny Xubuntu 🙂
Lahatsoratra tsara, tsy mampiasa XFCE aho fa mahazo ny misintona ~
Raha ny fanazavana, misy mahalala ve ny antony hitrangan'izany?
Ny fialantsiny azafady, misaotra mialoha ary averiko: tsara be ny lahatsoratra 😛
RabBa dia hoy izy:
Mamaly an'i RabBa
Vao nametraka LinuxMint 13 tamin'ny XFCE teo amin'ny birao very aho ary ity fampianarana ity dia tsara ho ahy hahafantatra momba ny fika XFCE izay tsy fantatro. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa gnome3 ao amin'ny ArchLinux aho ary izany no antony tsy nahalalako ny tombotsoan'ny XFCE sy ny habetsaky ny ahafahanao manamboatra ^ _ ^.
Faly aho fa nahasoa anao io 🙂
lohahevitra tena tsara ho an'ny xfce, manoratra amin'ny OS LUNA fanaoko aho, nametraka azy io ho toy ny rafitra tokana amin'ny solo-sainako, andao hojerentsika izay mitranga, amin'izao fotoana izao dia tiako be ilay izy nefa hety satria kinova voalohany io dia tsy tokony hatoky ahy amin'ireo bibikely izay ankehitriny fa hatreto dia tonga lafatra aho, tsy nisy olana, antenaiko fa hahatratra fahaleovan-tena tanteraka ny SD raha toa ny nataon'i linux mint.
Amin'izao fotoana izao dia manohy amin'ny alin'ny Mediterane aho, izay mahafatifaty.
Te hahafantatra aho raha misy programa ho an'ny tontolo birao maivana izay manao ny vokatry ny topi-maso mialoha ny sehatr'asa (birao).
Misaotra betsaka. Stamina XFCE!
Misaotra !!!, ny tonga lafatra rehetra ao amin'ny OpenSuse 12.3 miaraka amin'ny Xfce 😉
pipo65 dia hoy izy:
sarin-tsarimihetsika sy lohahevitra tena tsara fa tsy plank no ampiasaiko docky izay mitovy tanteraka amin'ny panneau rehefa entiko amin'ny rindranasa izany dia tsy misy mahasamihafa ahy manana toshiba celeron 600 miaraka amin'ny 192 mb ram hametraka debian miaraka amin'i xfce ary miaraka amin'ity lohahevitra ity dia manana 10 aho
Valiny amin'ny pìpo65
Salama, tsara ny nampiasako mint 15 xfce sy kanelina, ankoatry ny manjaro
Ary ny fototra dia raiki-pitia taminao aho, tafiditra tsara koa izy io, asa be loatra hampitoviana azy io, ary maivana koa dia maivana be raha oharina amin'ny ubuntu mahazatra, na kanelina, marina fa ny xfce dia maivana sy azo ampifanarahana, saingy aleoko mijanona amin'ny fototra os luna , ary napetrako ny kernel 3.11 ary tonga lafatra ny zava-drehetra, hany ka teo amin'ny birao dia nomeko ny vozona kanelina 15 Mint
Tsara ny lahatsoratra, saingy nieritreritra aho fa ianao koa dia hanazava ny fomba hananana ireo kisary Gnome 2, izay ireo no ampiasain'ny eO, ao amin'ny XFCE, miaraka amin'ireo menus amin'ny endrika lozam-pitenenana sy ireo safidy mitovy amin'izany. Hainao ve ny manao an'izany?
Ary ahoana no hitovizan'ny menio desktop?
Raha ny tokony ho izy, ny menio dia azo soloina Whisker Menu, menu Xfce tena tsara izy io ary azonao atao ny mampiasa plank ho dock, izay ilay ampiasainy ao amin'ny eOS.
Ny zava-misy dia ny fanomezana ny endriny hatsarana ny hevitry ny paositra. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Te hahafantatra ny fomba ahafahako mampifanaraka ny mari-pamantarana ny bateria xfce mba hitovy amin'ny mpanondro bateria eos (amin'ny wingpanel mazava ho azy) misy manana hevitra lavitra indrindra ve?
Roa taona ity lahatsoratra ity, saingy mbola manampy be ihany. Misaotra ny tutorial kely hanamboarana ny birao XFCE, nataonao izay hahatonga ilay interface linux puppy ho sariaka kokoa. Salama.
Debian Wheezy dia mety ho tonga amin'ny Xfce ho biraonao misy anao